China Tip Tap, Chip Groove Tap, Straight Flute Machine Tap, Machine Grinding Full, Tail M35 Cobalt ary mpanamboatra | Boda
Kitapom-bokatra, paompy Groove Chip, paompy mahitsy mahitsy, paompy milina fitotoana feno, koba M35
Ny tendrony tendrony izay mety amin'ny fanodinana kofehy manerana ny lavaka sy ny fandrindrana ny paingotra mankany ambany. Ny paompy fikosoham-bary dia ny paompy tsipika farany ambony, izay mety amin'ny fanodinana kofehy lavaka jamba
Ny tendrony tendrony, fantatra koa amin'ny fantsom-pitrandrahana puce, dia ampiasaina indrindra amin'ny fiasan'ny fanapahana kofehy amin'ny akora maro samihafa. Ny paompy mitarika dia manana lalantsara mitovy mahitsy amin'ny paompy mahitsy mahitsy, saingy misy lalan-kely miolikolika noforonina manokana eo amin'ny faran'ny aloha amin'ny ampahany fanapahana, mba hanosehana ny fanapahana avy any amin'ny faritra ambany amin'ny lavaka. Satria ny paompy tendrena dia misy asan'ny fihodinana sy famoahana puce, tsy vitan'ny miaro ny kofehy fa miaro ny kofehy.
Ho fanampin'ny fampihenana ny fanoherana fanapahana sy ny fisorohana ny fahasimban'ny paompy ateraky ny fanapahana fanakanana, ny paompy fanapahana dia afaka manapaka kofehy haingam-pandeha haingam-pandeha haingana kokoa noho ny paompy mahitsy mahazatra.
tapany metrika mitambatra hexagonal izy
Fitaovana: vy haingam-pandeha, mety amin'ny fanoratana vy malefaka, takelaka aluminium, takelaka vy
Metric 6pc: m3 * 0.5mm, M4 * 0.7mm, M5 * 0.8mm, M6 * 1mm, M8 * 1.25mm, M10 * 1.5mm
Parameter: ny halavany manontolo dia 58mm, ny halavan'ny lelany dia 28mm, ny halavany dia 30mm, ary ny tahony dia tantely 6.35mm amin'ny ankapobeny.
Fitsaboana ambonin'ny tany: Diamondra fotsy
Milanja: kitapo plastika metrika 60g, anglisy 70g, Volume 7 * 5 * 0.8
Paompy / paosin-tsolika ny milina HSS, teboka boribory kofehy, fisintomana vy hafainganam-pandeha haingam-pandeha, vy tsy metaly sy fitaovana aluminium manaparitaka fitaovana m3-m22. Ny maodely dia m3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22. Milina paompy。
Fitaovana: HSS haingam-pandeha haingam-pandeha 6542
Fampiharana: mety amin'ny fikitihana ny fitaovana milina, vy tsy misy fangarony, vy maty, varahina, aliminioma, firaka zinc, sns
6 mm sy ambany dia manondro / 8mm ary ambony dia lohany fisaka.
Boribory efatra sy zana-kazo efatra,
Boribory telo boribory boribory efatra, boroka vita amin'ny hazo
Torohevitra mafana: maro ny famaritana ny paompy. Raha mila maodely sy tsipiriany hafa ianao, mifandraisa aminay
Previous: Davaran-dàlana, fitrandrahana dingana vita amin'ny titane, fitrandrahana fantsom-bokotra hexagonal, fandavahana kely
Manaraka: Fitrandrahana miolakolaka, fantsom-pitrandrahana vy tsy misy fangarony, fantsom-pitrandrahana vy, fitrandrahana vy, fitrandrahana HSS, tsofa loaka
Tsindrio To Tip
Soso-kevitra tap Pay
Soso-kevitra Tap Tap
Tip Tap Toy